Rindrina premixed - Divenland
Matetitetika, plaster ary mortar
DIAGRAMY FITORIANA SYSTEM
Masonry sy plastering mortar toy ny singa manan-danja indrindra amin'ny fivarotana ny trano fananganana, ny cellulose eter dia mitana andraikitra lehibe. Ny fama-by tsara dia tokony hampiasa tsara sy malefaka antsasa-doka ary malefaka tsy mifikitra, fotoana ampy hampiasaina, mora ambaratonga; amin'ny mekanisation ny rihitra dia tokony ho ampy tsara mba ho mora ampiharina, antsy malama sy tsy miraikitra, fotoana ampy hiasana, mora haavo; ao amin'ny fanenanana ny feta dia tokony ho tsara, ampiharina, malefaka ary tsy mifikitra amin'ny antsy, mora ambaratonga; ao amin'ny fanenanana ny feta dia tokony ho tsara, ampiharina, malefaka ary tsy mifikitra amin'ny antsy, mora ambaratonga; amin'ny mekanisation ny rihitra dia tokony ho ampy tsara hampivelatra ny fanamboarana anio, ny feta dia tokony hanana fananana pumping tsara ihany koa mba hisorohana ny mety hisian'ny famotehana ny feta sy ny fantsona. Ny vatan'ny mortar dia tokony hanana toetra matanjaka tsara sy endrika ivelany, tanjaka azo tsindriana, mateza, tsy misy amponga loaka, tsy misy triatra.
Ny fitrandrahana rano eterulôtika Max cellulose dia mampihena ny rano entin'ilay substrate multi-vacances, mampiroborobo tsara ny fitrandrahana ny mason-tsolika, amin'ny faritra lehibe. Izy io dia afaka mampihena be ny mety hisian'ny triatra maina ny laona aloha ary hanatsara ny fifamatorana; ny fahaizany manitatra dia afaka manatsara ny fanamainana ny fotaka mando mankany ambonin'ny tany. Ny cellulose ether dia mampiorina ny fotaka mando, ary mampihena na misoroka ny delamination sy ny famoahana rano. Ny rheology sy ny fampihenana ny fanoherana, ka manamafy ny pumpability sy mampihena ny hamafin'ny asa. Ny ettera cellulose novaina dia manome fananana manohitra tsy fahita firy rehefa mametraka loham-by matevina, izay afaka mampihena ny fotoana fananganana sy mampihena ny fako.
Ny fotaka mando dia fifangaroan'ny simenitra, fitambarana tsara, fifangaroana (etera selulosa indrindra), rano sy singa samihafa voafaritra arakaraka ny toetra, arakaraka ny refy iray, aorian'ny fandrefesana sy ny fampifangaroana ilay zavamaniry mifangaro, ary avy eo dia nafindra tany amin'ny toerana ampiasaina amin'ny fifangaroana kamiao, asio ao anaty fitoeran-jiro manokana ho fitahirizana ary ampiasaina ao anatin'ny fotoana voafaritra.
Raha ampitahaina amin'ny feta mifangaro tranokala nentim-paharazana, ny fahasamihafana lehibe indrindra dia ny fampidirana ny rihitra nohosorana masinina, toy ny fampidirana andiana Max cellulose etera mety ho Ilay fifangaroana izay manatsara ny fahombiazan'ny rihitra, ka mora mora ny mifangaro ao. vidin'ny fihazonana rano avo, halavirana, haavony lehibe aorian'ny paompa mbola manana asa tsara. Ny tombony lehibe indrindra dia ny fahombiazan'ny fananganana avo, ny kalitaon'ny feta aorian'ny fananganana azy, ary noho ny hafainganam-pandehan'ny loaka voalohany rehefa manafotra. Noho izany, afaka manana fikorohana azo antoka kokoa miaraka amin'ny substrate izy io, izay afaka mampihena amim-pahombiazana ny fisian'ny famoronana amponga feno tafo.